Elinye labesifazane abadumileyo kwi-cinema yaseRashiya kubonakala ukuba baye bathetha ukuhlala phantsi. Nangona kunjalo, iindaba zakamuva ezithandwa ngumthandi wakhe zinika ithuba lokucinga ukuba kungekudala i-Marius Vaysberg oneminyaka engama-44 ubudala uya kufuneka aqonde ubunzima besayensi yokukhulisa abantwana.
Inyaniso yokuba u-Weissberg waqala ukutshatisa intsha kunye nelungu le-"House-2" uNatalia Bordo (owaziwayo kwiprojekthi ekhwaza phantsi kwegama elithi Krivozub), yaziwa ngo-Agasti. Kwaye ngo-Oktobha, umlawuli we-comedy "Uthando kwiSixeko esikhulu" sele sele utshele abalandeli ukuba ulungele ukutshata nomthandi wakhe.
Akukho mntu walindele ukuba iziganeko zenzeke kwijubane elinjalo. Ngokutsho kweendaba, uNatalie usemnyakeni wesine wokukhulelwa, ngoko mhlawumbi umtshato usekupheleni kwekona.
Kuyaziwa ukuba ngexesha lokumazana noNataliya, u-Weisberg wayenomdla kunye nomdlali waseRussia u-Ekaterina Spitsa. Esi sibini sibonisa ngokucacileyo ubudlelwane babo kwimikhosi yeKinotavr, eyayibanjelwe eSochi, kodwa ekubuyeni kwakhe eMoscow umlawuli wahlukana nomdlali othandwayo, kwaye emva kweentsuku ezimbalwa wazisa umngane wakhe omtsha kubahlobo.
Akukho bantu abanomdla kwihlabathi, iinjongo zabo njengeembali zeeplanethi
KuLera Kudryavtsev wahlaselwa inkxaso yeVladimir Friske
U-Alexander Buinov uqokelela phantsi kweebhanki kunye neebhotile
IMastic evela kumdaka we-marshmallow
Feijoa kunye nobusi, iresiphi ngesithombe
Ukuphuhliswa komntwana ngenyanga yokuqala yobomi
Isaladi kunye neembotyi, amaqanda kunye neetamatato
Ukubhiyozela iKrisimesi kwintsapho
I-jellied pie ngamakhowe
Iibhisikidi kunye ne-chocolate kunye nomnyama
I-etiquette yokutya: amabala